Nkume a Comment	/ eme nke ọma ifriizi Fikiere nri / site Admin
Ọdịiche dị n'etiti ndụ na-aga nke ọma, nwee ọ marketụ ahịa, ma nwee ọganihu le-vel GỤKWUO »
1 Comment	/ Nchekwa nri ngwa ngwa / site Admin
Enwere ike inwe oge mgbe ị na-agaghị apụ apụ oge ụfọdụ. N'okpuru ọnọdụ ndị a, ị ga-achọ ka gị na ya rie nri ụbọchị niile ị ga-apụ. Dị ka o kwesịrị ịdị, you won’t be able to carry cooked food with you and this is where the importance of storing food …
ifriizi Fikiere lanarị nri GỤKWUO »
1 Comment	/ kacha mma ifriizi Fikiere nri / site Admin
Ayszọ iri gị Thrive Life mkpụrụ osisi na veggies GỤKWUO »
13 Comments	/ kacha mma ifriizi Fikiere nri, eme nke ọma ifriizi Fikiere nri / site Admin
Uru nke ịbụ a ọma ndụ ọkachamara amụba ndụ na-enye nke kacha mma mma nri na ihe ezi uche ahịa. Ịzụ nri a na elu-ogo nri ụlọ ahịa a na-ewere a nnọchianya nke awụ. I nwere ike nụrụ ụtọ a dịgasị iche iche nke efere e na ọtụtụ obere oge. Ọ bụ ezigbo iji nri na ntụziaka ndị a na-echekwa maka ọzọ, ememe …
Uru nke ịbụ a ọma ndụ ndụmọdụ GỤKWUO »
11 Comments	/ kacha mma ifriizi Fikiere nri, eme nke ọma ifriizi Fikiere nri / site Admin
Olee otú amụba Life Consultants Mee? Amụba Life ifriizi Fikiere oriri na-eme elu mma, ike na ngwaahịa na-akwalite ahụ ike iri ihe oriri na ndụ na-eme ka nri nkwadebe ngwa ngwa na oké uto na àgwà! Nke a bụ oké ụzọ nke na-akwalite ahụ ike nhọrọ maka inyere ndị mmadụ stay kwesịrị ekwesị, ida ma ọ bụ ịnọgide na-enwe anwu, na mma ha echiche nke n'ozuzu …
Ole do amụba maka eme? GỤKWUO »
Amụba ndụ Ezi ntụziaka
Amụba ndụ Ezi ntụziaka ndị na-achọ ike nri Ezi ntụziaka na a ọsọ ọsọ ga-enwe obi ụtọ ịhụ niile nke ngwa nri ụzọ dị. Ndị a ngwa ngwa Ezi ntụziaka nwere ike enyere gị aka ike efere ị na-ejikarị na-eche na-agaghị ekwe omume. O doro anya na, mgbe ị na-amalite ịgagharị ohere, ị ga-achọta ọtụtụ ndị oké echiche maka nri abalị. Ọ bụrụ na …
Amụba ndụ Ezi ntụziaka GỤKWUO »
3 Comments	/ kacha mma ifriizi Fikiere nri, eme nke ọma ifriizi Fikiere nri / site Admin
Eme nke ọma ndụ ngwaahịa Iri ọma bụ ihe ndị ọzọ ndị mmadụ na-agbalị ime taa. Dị nnọọ n'ihi na ị chọrọ iri nri ahụ nri apụtaghị na ị na-enwekwu oge. Ị na-ahụ onwe gị na-achọ nri abalị echiche, nke ga-agụnye ngwa Ezi ntụziaka na-abụ mgbe nile ike. Ọ dị mfe iji chọta efere na ị ga-achọ …
Amụba ndụ ngwaahịa GỤKWUO »